मलाई आफ्नै सरले यस्तो बनाए…
September 11, 2020 575
बैतडीका दुई शिक्षकमाथि आफ्नै विद्या’लयमा अध्य’यनरत एक छात्रालाई करणी गरी ग’र्भवती बनाएको आ’रोप लागेको छ । जिल्लाको दुुर्गम सिगास गाउँपालि’काका शिक्षकले नै आफ्नै विद्याल’यकी छात्रालाई क’रणी गरेको आ’रोप लागेको हो ।
पीडित किशोरी क’रणी भएपछि अर्कैसँग भा’गेर बिहे गरेको र छ महिनामै छोरी जन्मिए’पछि क’रणी गरेको कुरा बा’हिर आएको हो ।
सिगासको एक विद्याल’यमा कक्षा ८ मा अध्ययन गर्ने १७ वर्षीया ती छात्रालाई सोही विद्यालयमा पढाउने शिक्षक खड’क बोहरा, केशव बोहरा र स्थानीय रामबहादुर बोहरालेक’रणी गरेको आ’रोप लागेको हो ।
केशव अहिले विद्यालय छो’डेर गाउँपालिकामा कार्यरत रहेको बुझि’एको छ । तीनै जनाले ती छा’त्रामाथि पटक’पटक क’रणी गरेपछि भा’गेर बिहे गर्न बा’ध्य बनाएको छात्राका आफन्तले आ’रोप लगाएका छन् । छ महिनामै छोरी जन्मि’एपछि किशोरी’लाई घरका मानिसले सोधपु’छ गर्दा आफूलाई ती व्यक्तिहरुले क’रणी गरेको किशोरी’ले बताए’को एक आफन्तले जानकारी दिए ।
उनले भने, “घटना पहि’लेको भए पनि गाउँमै मि’लाउने भन्दै धेरै प्रयास गरे । अहिले कुरा बाहिर आएको छ, अहिले पनि विभिन्न प्रकारका खेल भइरहेका छन् ।” जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमु’ख प्रहरी नायब उपरीक्षक नाराय’णप्रसाद अधिकारीले पी’डित किशोरीलाई जिल्ला सदर’मुकाममा ल्याउने तयारी भएको र किशोरीसँगको वयानपछि मात्रै घट’नाका बारेमा थाहा हुने बताए ।
उनले भने, “यो कुरा बाहिर आइस’केपछि हामीले घट’नालाई सूक्ष्मरूपमा अध्ययन गरिरहेका छौँ । सुरक्षाका लागि पनि किशोरीलाई हामी जिल्लामा ल्याउने तयारी गरेका छौँ । संलग्न भनिए’का मान्छेको पनि खोजी गरिरहेका छौँ ।” किशोरीलाई ललाइफ’काई गरेर क’रणी भएको भए पनि कानूनअनुसार कारवाही हुने प्रहरी नायब उपरीक्षक अधिकारीले बताए ।
मुलुकी अ’पराध संहिता, २०७४ को परिच्छेद १८ मा १८ वर्षभन्दा कम उमेरका महिलालाई ललाइफ’काई वा महिला’को मञ्जुरी लिएर क’रणी ग’रेमा समेत कानूनी कारवाही हुने उल्ले’ख छ । कानूनअनुसार १६ वर्ष वा सोभन्दा बढी १८ वर्षभन्दा कम उमेर’की महिलामाथि क’रणी गरेमा १० देखि १२ वर्षसम्म कैद सजाय हुने उ’ल्लेख छ ।
यद्यपिकरणी को आरोप लागेकाहरुलाई भने अहिलेसम्म प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छैन । आ’रोप लागेकाहरुलाई हालसम्म पनि सोध’पुछसमेत नगरेको बताइएको छ ।
बालिकाले महेन्द्रन’गरपोष्टको कुराका’नीमा पनि भनेकी छन् बुवा आमा घरमा नभएको बेला मलाई करणी गरे । भर्खरै मन्दिरबाट फर्केर घरमा एक्लै बसि’रहेको बेला खडक सर आए । जसले मला’ई एक कक्षादेखि आठ कक्षासम्म प’ढाएका थिए । मैले तल्लो घर’मा जाने तयारी गर्दैगर्दा उनले मलाई समाते ।
अचानक यस्तो हुँदा म’लाई अचम्म लाग्यो र पिडा पनि । क’राउन त खोजे’की थिए तर सकिन मुख बन्द थियो । मेरो आवाज पनि बन्द भयो उठ्नै सकिन । साँझ घरमा आमा आउ’नु भयो तर मैले दिउसोको घटना भन्न नै सकिन र चुप’चाप बसे ।
स्कुल बाट फर्किने बेला मौका मिल्यो कि य’सै गर्न थाल्नु भयो सरले । घटना यतिमै सि’मित रहेन आफुले त यस्तो गरे गरे तर उनले आफ्नो अर्को साथी’लाई पनि सु’नाएछन् त्यसपछि अर्को सरले पनि सुरु गरे । त्यसपछि म स्कुल बाट घर फर्किंदा यी दुइ सर मध्य एक जना मेरो साथमा आउथे पालै’पालो मलाई उनीह’रुले यो का’र्य गर्न थाले तर मैले इज्जत जाने डरले कसैलाई केहि भन्न नै सकिन ।
एकदिनको कुरा हो शैचा’लयमा गएका बेला खड’क पनि भित्र पस्यो र मलाई त्यहि गर्यो त्यो पनि मैले कसैलाई भन्न सकिन चु’पचाप सहेर मात्र बसे । घरमा आमा’लाई भन्छु भनेर धेरै दिन सोचे । तर भन्न सकिन् । त्यसको केही महिना’पछि थाहा भयो । पेट’मा बच्चा बसि’सकेछ । अब म सँग दुई वटा विकल्प मात्र थिए ।
के त दे’हत्याग गर्ने वा घर छोडेर जाने । धेरै दिन’सम्म मनमा यस्तै सोच आइरह्यो । मेरो मनमा अर्को सोच पनि आयो देहत्या’ग गर्नु भन्दा बरु मैले अर्को उपाए निकाले र गाउँ कै केटा’संग भागेर बिवा’ह गरे । बिवाह त गरे तर पेटमा बच्चा छ भन्ने कुरा चा’ही मैले भनिन् ।
केही महिना सबै कुरा ठिकठाकै चल्यो । जब भदौंमा छोरी जन्माए । त्यसपछि गाउँमा हल्ला भयो र सो’धपुछ गर्न थालियो र यो घट’ना बाहिर आयो । त्यस’पछि बाध्य भएर ति शि’क्षक र वडा कार्या’लयका कर्मचारीबारे मुख खोल्नैपर्ने अवस्था आयो । छिमे’की जिल्ला गएर काम गर्ने लोग्ने पनि घर फर्किए । यो बेला के गर्ने के नगर्ने सोच्नै सकेकी छैन् ।
गाउँका सबै’जनाले जस्को बच्चा हो उसैले जिम्मा लिनुपर्ने कुरा गर्दैछन् । वडा र गाउँपालि’का मान्छेहरुले ‘यतै’ मि’लाउने भन्दै कहि नजान् भनेका छन । माइती पट्टीका एक दुई जना दाइहरुले प्रह’रीमा जान सल्लाह दिएका थिए ।
मलाई प’नि त्यही ठिक ला’गेको थियो । तर गाउँका जान्नेसुन्ने तथा वडा र गाउँपालि’काका सबै मान्छेले मिलाउँछौ भनेका छन् । जसले जे भनेपनि म माथि त्यस्तो गरेर यो अवस्था’मा पुयाउने’हरुलाई स’जाय होस भन्ने चाहना त छ ।
तर म एक्लै के गरु ? गाउँ भन्दा बा’हिर कही गएकी छैन् । के गर्नेुपर्ने हो त्यो पनि थाहा छैन् । मनमा त लागिर’हेको छ कि आज म माथि त्यस्तो गर्ने’हरुले भो’ली अरुलाई पनि नगर्लान र ? यो पाँच, छ महि’नाको अवधीमा उनि’हरुले त्यस्तै किसि’मका अरु ५, ६ वटा घटना गरिसकेको सुन्नमा आएको छ । एउटाले गरे’पछि अर्कोलाई भि’डा’ईदिने । अर्कोले अर्कोलाई गरेर महिला’हरुलाई नै गलत प्रमा’णित गर्ने गरेका छन् भन्ने सुन्छु ।
मेरो गल्ती त केही थिएन् । तर यतिबेला म’र्नुं न बाँ/च्नुको अवस्था’मा पुगेकी छु । नाक’मा आएको सि’गान पुछेर कख’रा सिकाउँदै आठ कक्षा सम्म पढाउने शिक्ष’कले त्यस्तो गर्लान भन्ने कल्पना समेत गरेकी थिइन् । त्यसपछि जसले जन्माए, हुर्काए उनले त केही गरि’देलान कि भन्ने थियो ।
अहँ वास्ता नै गरेनन् । मे’रो गल्ती यति थियो कि म माथि भएको अन्याय:बारे समयमै भन्न सकिन । अहिले आ’मा बुवाको मात्रै होइन, समाजको पनि घृ/णाको पात्र भएकी छु ।
कसैले फोनमा सो’ध्यो भने ठिकै छ, केही गाह्रो छैन भन्नु भनेका छन् । गाउँका जान्ने बुझ्नेले नै यसो भन्नु भनेपछि अहिले सबैसँग फोनमा त्यही भन्दै आ’एकी छु । यस्तो अवस्था’मा म के गरु ?
Prevकोरोनाबाट नेपालमा आज ५ जनाको मृ:त्यु , यी यी जिल्लाका हुन् मृतक…
Nextनेपालमा संक्रमितको नयाँ रेकर्ड, आज यती धेरै संक्रमित थपिए ! हेर्नुहोस्
बुढानिलकण्ठ भगवानको दर्शन गर्दै आजको राशिफल हेर्नुहोस्
कुलमान’लाई नियुक्ति गर्न कानुनी बाधा छ, लोड’सेडिङ हट्नु उनको एक्लो प्रयास होइन: मन्त्री प्रदीप ज्ञावली
वर्षौ विदेश बसेर कमाउँदा पनि घरमा एक पैसा नरहेपछि श्रीमतीको कर्म थाहा पाउँदा श्रीमान अंगालो हालेर रोए (72106)